Screen Capture Engine: uu software si loogu xiro bots of ThatsLuck
Screen Capture Engine waa softiweer aan abuuray si aan u fududeeyo nidaamka isku xirka bootooyinkeyga barnaamijyada kala duwan ee khadka tooska ah intii suurtagal ah.
Thanks to barnaamijkan aad isla markiiba ka soo dejisan karto xiriirka hoose ee bogga, waxaad ku habeyn kartaa miisaska shaashadda boggaga internetka ee kala duwan (Ciyaaraha DHAQA AH, Evolution, Netent, iwm) oo leh dhowr tallaabo oo fudud.
Ka shaqeynta barnaamijka
Marka faylka zip-ka la soo dejiyo on your desktop, waa inaad bilowdid fulinta oo barnaamijka ayaa isla markaaba diyaar u ah inuu isticmaalo.
Waxa kaliya ee la sameeyo waa in la galo lambarka hawlgelinta in aad ka hesho qaybta hoose ee boggan.
Sida aad u aragto shaashadda Screen Capture Engine waxay ka kooban tahay dhammaan howlaha qabashada ee la bixiyay.
Isticmaalku waa mid fudud oo waad awoodi doontaa inaad si dhakhso leh ugu qanciso faa'iidooyinkiisa haddii aad horey u iibsatay bot Roulette Bias Sniper, isticmaalkeeda - laga bilaabo nooca 8.0 wixii ka dambeeya - wuxuu bixiyaa xiriir la leh mashiinkan qabashada shaashadda cusub by ThatsLuck.
Haddii aad iibsatay noocii ugu horreeyay ee Roulette Bias Sniper (ama barnaamij kale) ha ka welwelin, dhammaan wararka ku saabsan ThatsLuck had iyo jeer waa bilaash, hadaadan horey usameynin, soo dejiso nooca cusub kuna kici koodhka aad heysato, taasi marwalba waa ansax!
Qalabaynta softiweerka iyo isku xirnaanta Roulette Bias Sniper (ama bots kale markii la helo), waxaad ka daawan kartaa fiidiyaha kanaalka ► YouTube.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad wax shaki ah ka qabtid ama aad su'aalo ka qabtid isticmaalka barnaamijka, sida iska cad waad ila soo xiriiri kartaa adigoo buuxinaya the foomka taageerada.
XEERKA SHAQAALAHA BILAASH AH
Soo Degso Fayl	SCEngine2.zip - 2 MB
Ciyaarta 2 Xls